Yamamoto iyo Axmed Madoobe oo Maanta Kismaayo ku Balansan - Awdinle Online
Yamamoto iyo Axmed Madoobe oo Maanta Kismaayo ku Balansan
February 11, 2020 (Awdinle Online) – Danjiraha Dowladda Mareykanka Donald Yamamoto ayaa la qorsheynayaa in uu maanta safar shaqo ku tago magaaladda Kismaayo ee Maamul Gobaleedka Jubbaland.
Ambassador Yamamoto ayaa waxaa safarkiisa ku wehelin doona safiiro xubno ka wada tirsan beesha caalamka iyo saraakiisa sar sare AMISOM, AFRICOM iyo qaar ka mid Taliyeyaasha hogaamiya Howlgalka la dagaalanka Burcad badeeda Soomaaliya ee ka socda dalalka midowga reer yurub ee ilaaliya badda iyo xeebaha Soomaaliya.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegey in wadahadala dhex mari doona beesha caalamka iyo Madaxda sare ee maamulka Jubbaland ay ka soo bixi doonaa qodobo aysan ku farxin Dowladda Federaalka ah.
Sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in maamulkaasi ay si buuxda beesha caalamka ay ugu balan qaadi doonaan taageero buuxda, lana shaqeyn doonaa.
Dowladda Federaalka ah ayaa horey u sheegtey inaaney aqoonsaneyn doorashadii sanad kii hore dabayaaqadiisa ka dhacdey Jubbaland ee lagu soo doortey Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) aysan aqoonsaneyn, waxaaba barbar socda dagaal toos ah iyo mid dadban oo ay dowladu kula jirto Jubbaland.
Previous articleC/rashiid Janan oo jawaabay ka bixiyey hadalka reer Mandhera oo ahaa inuu ka baxo magaaladooda
Next articleDowladda Kenya oo Ciidamo fara Badan soo Dhoobtay Magaalada Mandera